Doorways and windows of Jaipur – The Voyager
Discovered many marvelous doorways and windows in Jaipur, the Pink City, Rajasthan – India.
Richly carved wooden doors, miniature windows, decorated with motifs of peacocks, flower and petal decorated door, fruits and vase designs door, super cute small windows and doors with copper carving are commonly seen in City palace, Hawa Mahal and in all famous palaces and forts of Jaipur.
There are too many impressive doors and windows and one keeps gazing at their beauty.
These old beautiful doors and windows giveaview of the glorious historic architectural style of the royal Jaipur heritage.
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဂျေပူးမြို့မှာ သိပ်လှလွန်းတဲ့ တံခါးပေါက်တွေ၊ ပြတင်းပေါက်တွေကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
အနုစိတ်ထွင်းထုထားတဲ့ သစ်သား တံခါးပေါက်၊ ပြတင်းပေါက်ပိစိလေးတွေ၊ ဒေါင်းရုပ်ပုံစံကို အသေးစိတ်ဆွဲထားတဲ့ ဂိတ်ကြီးတွေ၊ ပန်းခက်ပန်းလက်တွေကိုရေးဆွဲထားတဲ့ တံခါးပေါက်တွေ၊ သစ်သီးဝလံပုံတွေ၊ ပန်းအိုးပုံတွေဆွဲထားတဲ့ တံခါးပေါက်တွေ၊ သိပ်ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပြတင်းပေါက်သေးသေးလေးတွေ၊ သေချာထွင်းထုပုံဖော်ထားတဲ့ ကြေးနီနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ တံခါးပေါက်ကြီး စတာတွေကို ဂျေပူးမြို့ရဲ့ အထင်ကရနေရာအတော်များများမှာတွေ့မြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အနုစိတ်လွန်းလို့၊ သိပ်ကိုလှလွန်းလို့ ငေးကြည့်လို့မဝနိုင်အောင်ပါပဲ။
ရှေးကျပြီး အိုဟောင်းနေပေမယ့် ဒီနေ့ထိတိုင် မပျက်မစီး လှပနေဆဲဖြစ်တဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေနဲ့ တံခါးပေါက်တွေဟာ ဂျေပူးမြို့ရဲ့ ခမ်းနားကြီးကျယ်လှတဲ့ သမိုင်းဝင်အမွေအနှစ် ဗိသုကာလက်ရာတွေကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပြသဖော်ကျူးလို့နေပါတယ်။